Muddo intee le'eg ayay alaabada xashiishka ee la cuni karaa sii ahaanayaan kuwo cusub? • Dawooyinka Inc.eu
Mudo intee leeg ayay alaabada xashiishadda ee la isticmaali karo ay sii ahaato mid cusub?
Edibles durba waa qayb muhiim ah oo ka mid ah bixinta xashiishadda ee dad badani ay isticmaalaan, iyo muddooyinkan dambe, daacuunka dartiis, qaarkood ayaa xitaa dooran kara inay sigaar-cabidda gebi ahaanba joojiyaan oo ay u beddelaan burooyinno caafimaad dartood.
1 Waxyaabaha la cuni karaa ma leeyihiin nolosha shelf la mid ah cuntada caadiga ah?
2 Waxyaabaha la soo iibsado miyey lumiyaan awooddooda waqti ka dib?
3 Ka hubi calaamadda macluumaad kale oo muhiim ah
Sida bariiska, baastada, iyo waraaqaha musqusha, waxaad ka fikiri kartaa inaad kaydiso waxyaabaha ku filan oo aad ku dhaafto xilliga go'doomintaada, laakiin si ka duwan sidii kuwii hore, cunnada caadiga ah ayaa badanaa burbura. Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay: intee intee la cunaa cunnadu inay sii cusboonaadaan?
Waxyaabaha la cuni karaa ma leeyihiin nolosha shelf la mid ah cuntada caadiga ah?
Sida laga soo xigtay Scott Riefler, Madaxa Sayniska Sayniska ee SōRSE Technology, jawaabtu waa haa. "Marka cannabinoid si sax ah loo soo bandhigo ... ma fileyno inay bedesho nolosha shelf ee mashiinka cuntada lafteeda." Tani waxay ka dhigan tahay, tusaale ahaan, in xabad shukulaatada xashiishka ah ay jiri doonto illaa inta ay ka dhigan tahay shukulaatada dhaqameed.
Haddii loo maleeyo in - xaalado badan sidoo kale waa caqli caadi ah: hubi taariikhda uu dhacayo baakaduhu si loo hubiyo nolol wanaagsan oo dheer iyo dhadhanka ugu badan iyo muuqaalka alaabta, oo fiiro gaar ah u yeelo taariikhda dhicitaanka, taas oo tilmaami doonta marka shey uusan badbaado u ahayn in la cuno. Iyo sida cunnooyinka laga heli karo dukaan kasta oo raashinka ah, waxyaabaha la cuno oo leh walxaha ka hortagga u dhigma ayaa ka sii dheereyn doona kuwa aan lahayn wax kaydiyayaal ah.
Guud ahaan, tani waa war wanaagsan kuwa doonaya inay iibsadaan tiro aad u tiro badan. "Inta badan cuntada la cuno waxay leeyihiin nolol aad u wanaagsan," ayuu yiri Riefler. "Haddii aad keydiso keyd, waxaan kugula talineynaa inaad iibsato wax aan ka badnayn lix bilood ka hor nooc kasta oo cunto ah."
Laakiin waa sidee kuwa ku habboon jikada oo doonaya inay cunaan xashiishadda cannabis u gaarka ah?
“Marka hore ka fiirso dhigga aan lagu shufin ee waxa aad isku dayeyso inaad sameyso; ka fikir sida aad u kaydiso iyo inta ay qaadaneyso cunitaankiisa ama isticmaalkiisa. Nuxurka cannabinoids ma saameyneyso nolosha cuntada ee lafteeda, ayuu yiri Riefler.
Waxyaabaha la soo iibsado miyey lumiyaan awooddooda waqti ka dib?
Marka sidee dhakhsaha ah ayay u yeelan doontaa awoodda ku jirta xaalad la cuni karo? Riefler wuxuu sharraxay:
“Awoodda THC si tartiib tartiib ah ayuu hoos ugu dhacaa waqtiga. Taariikhda dhicitaanka ama taariikhda uu dhacayo waxay kahadleysaa meheradda cuntada, kamahadasho cannabinoid ahaan. Marka laga hadlayo muddo saddex ilaa lix bilood ah, awooddu waa inay ahaataa sidii hore mooyee haddii aan lagu xadgudbin inta lagu jiro keydinta… qaab la cuni karo, THC waxay haysaa waxtarkeeda illaa lix bilood. “
Markii la weydiiyay in dhammaan cannabinoids-ka loo siman yahay, Riefler wuxuu yiri:CBD waa cannabinoid aad u deggan. THC, dhanka kale, si tartiib tartiib ah ayey hoos ugu dhacdaa waqtiga. ”
Laakiin ka waran farqiga u dhexeeya noocyada kala duwan ee wax la cuni karo?
“Waxa ka qayb qaadan kara xaalufinta waa oksijiin. Maaddooyinka qaab ahaan u adag, sida xanjo ama lozenge, helitaanka ogsijiin ee gudaha ku jirta ayaa aad uga yar tan dhalada cabitaanka, ayuu yidhi Riefler. “Wax kasta oo soo dadajin kara luminta awooda waxay noqon kartaa jawi aad u acidic ah ama aasaasi ah. Habka loo isticmaalo in lagu daro cannabinoid arrimaha la cuni karo. ”
Ka hubi calaamadda macluumaad kale oo muhiim ah
Marka lagu daro taariikhda dhicitaanka, astaanta ku taal badeecada la cuni karo iyo shey kasta oo xashiishadda ah waxaa ku jira macluumaad badan oo kale oo muhiim ah oo macaamiisha ay tahay inay dib u eegaan, oo ay ku jiraan tilmaamaha qiyaasta iyo kaydinta, qiimaha nafaqada, iyo lambarka dufanka haddii ay dhacdo soo noqosho shey. Iyo haddii aad leedahay xayiraad gaar ah oo xagga cuntada ah, hubi inaad hubiso sumadda.
Iskusoo wada duuboo, cunnooyinku waxay yeelan karaan nolol dheer oo caqli gal ah ayaa ah aaladda ugu fiican ee aad ku go'aansan karto haddii wax ka baxsan yihiin barta isticmaalka aaminka ah. Tixgeli inta ay noqon doonto ilaa safarkaaga soo socda ee dukaameysiga, oo hubi in aad si ammaan ah u keydiso badeecada adoo hubinaya calaamadaha, taariikhda dhicitaanka, iyo sida ugu fiican ee taariikhaha kahor - oo ay weheliso kaydinta habboon ee alaabada.
Ilaha waxaa ka mid ah Leafly (EN), Reddit (EN), RoyalQueenSeeds (EN)
Dawada marijuana ee Michigan waxay siisaa wadar bilaash ah qofkasta oo qaata talaalka 'Covid-19'
In kasta oo adduunku wali la halgamayo Coronavirus, farmashiyaha xashiishka ee Michigan wuxuu leeyahay wax aan caadi ahayn ...
Mastercourse waxay keenaysaa qaybta beeraha iyo warshadaha Mediethe
Wadahadalka Jungle wuxuu la yimaadaa Cannabis daawo ah oo loo yaqaan 'Mastercourse Medicinal Cannabis' wuxuuna isku xiraa farqiga u dhexeeya adduunka dhirta iyo ...
Hype Cusub: Calendar Advent Calenda - Kaalay on Christmas!
Waxaan maqalnay wax ku saabsan jadwalka taariikhda lipstick, jadwalka taariikhda biirka, xitaa jadwalka taariikhda imaatinka gin, laakiin waa markii aad ka fikirtay ...